September 2017 - Ceelhuur Online
September 30, 2017 September 30, 2017 Cali Yare148
Kadib kulan maanta Cadaado ku yeesheen Baarlamaanka ayaa War qoraal ah oo uu soo saaray Gudoomiyaha KMG ah ee Baarlamaanka Galmudug Xildhibaan Axmed Yuusf Xasan (Ciyoow) lagu magacaabay Guddiga Doorashada Madaxwaynaha Galmudug oo ka kooban 13toban Xubnood oo ka tirsan isla Baarlamaanka Maamulkaas. Magacaabista Guddiga Doorashada Madaxwaynaha Galmudug ayaa imaanaysa ayadoo Magaalada Cadaado ee Xarunta […]
September 30, 2017 Cali Yare142
September 30, 2017 September 30, 2017 Cali Yare172
Olgan Baker ah Danjiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ay kamid tahay Isbedelada dhinaca Amniga ee Soomaaliya ka dhacay, isagoo si weyn u amaanay Ciidamada Qaranka uu sheegay inay ka guuleysteen Aragagxisada aan dooneyn in dadka Soomaaliyeed ay nabad ku noolaadaan. “Aniga waxaan ogahay in Isbedelo waa weyn oo dhanka […]
Ciidanka dowladda Talyaaniga ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Yurub ee ka howlgala Soomaaliya ayaa maanta deeq kala qalab ciidan ah waxaa ay ku wareejiyeen taliska ciidanka Asluubta Soomaliyeed. Qalabkan ayaa waxaa kamid ah jaakadaha xabadda celiya ee loo yaqaano Bullet Proof, tuutaha ciidanka, dhanka Sports iyo waxyaabo kale, waxaana lagu wareejiyay taliye ku xigeenka […]
Carlo Ancelotti Oo Maanka Ku Haya Shaqada Arsenal
September 30, 2017 Hafsa Haji151
Carlo Ancelotti ayaa go’aansaday inuu baaqi ku sii ahaado shaqa la’aan inta ka harsan xilli ciyaareedkan, lakiin waxa uu doonayaa inuu bedelo Arsene Wenger booska Arsenal hadii ay u soo bandhigto shaqada, sida laga soo xigtay wargeysyada Talyaaniga. 58 jirkaan ayaa shaqada ka ceyrisay Bayern Munich khamiistii wax ka yar 24 saacadood ka dib markii […]
Muqdisho:Rw Khayre oo Xariga ka jaray Saldhigga Milatari ee Turkiga(Sawiro)
September 30, 2017 Cali Yare149
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa goor dhow xarigga ka jaray Saldhigga Milateri uu Turkiga ka dhisay magaalada Muqdisho, kaasoo lagu tababari doono Ciidamada Soomaaliya. Munaasabadda Furitaanka Saldhiggan oo goor dhow soo gaba gabowday ayaa waxaa ka qeyb galay Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, wakiilo ka socday Beesha Caalamka, saraakiil ka kala socday Turkiga iyo […]
September 30, 2017 September 30, 2017 Hafsa Haji145
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay rajeyneyso inay Sergio Aguero dib ugu soo laabto dhaawaca labo illaa afar isbuuc ka dib shilkii uu ku galay Amsterdam. 29 jirkaan waxa uu jab kasoo gaaray feer kadib markii uu ku soo laabtay garoonka diyaaradaha markii uu ka soo qeyb galay bandhig faneed ka dhacay caasimada Holland. […]
Dowladda Kenya ayaa ka digtay weeraro ay soo qaadaan xoogagga Al-shabaab oo ka dhaca magaalada Mandera iyo deegaannada dhaca gobolka Waqooyi Bari Kenya Dowladda ayaa sheegtay in ay jirto cabsi la xiriirta weeraro ka dhaca magaalo xeebeedyada dalka Kenya , halkaasi oo ay ku badan yihiin dadka ka yimaada dalalka ka baxsan Kenya iyo sidoo […]
September 30, 2017 Cali Yare180
Markaan eegay/arkay:- Xaaladda Galmudug ee murugsan una dhaxeysa burbur iyo badbaado 50%. Hirshabelle oo ka horeysay, Caga adagna aan ku taagneyn weli. Koofur-galbeed oo Mucaarad-keedii bilaabeen hawl-gal. Puntland oo Odayaashii iyo Isimadii bilaabeen kacdoon ka dhan ah Maamulka iyo heshiisyadii uu galay. Jubbaland oo baaqii ay soo saartay iyo abaabulka Maamulada oo ay dhibsatay Dowladda […]
September 30, 2017 Cali Yare155
Muwaadinaan Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdulaahi Maxamed Cali ayaa sugnaa kaligii goob ganacsi oo uu ka ahaa waardiye, waxaana ku soo weeraray koox burcadd ah kuwaa oo dhac baahsan u geystay inta aysan dab qabadsiin dukaanka. Kooxda burcada ah ayaa waxaa la sheegay in ay Marxuumka ku xereen qol yar oo dukaanka qeyb uga yaalay […]